Ukubaluleka kokwenza uyilo olulula, oluncinci kunye nolungqalileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo lwabantu bayazi ukubaluleka kokulula, kuba kubalulekile ukuyenza Ubuncinci, uyilo olulula nolungqalileyo enokufikelela kubaphulaphuli bethu kwaye ifezekise indima yabo.
Kodwa zininzi izinto eziphazamisayo, ke eyona nto ilula kukufezekisa lula, kuba into esiyifunayo kukuba uyilo lwethu lubonakale, ke sifuna ukubandakanya iinkcukacha ezininzi ezahlukeneyo kunye nezimbo, eyenza kube nzima ukuyenza ibonakale ilula.
1 Iingcebiso zokuyila ngokulula, ngaphandle kobunzima
2 Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba umxholo kufuneka ube mfutshane
Iingcebiso zokuyila ngokulula, ngaphandle kobunzima
Ukuba uluhlobo lomntu onobunzima bokufezekisa oko kubizwa ngokuba lula, ungakhathazeki, siza kukunika ezinye iingcebiso ukuze ungafi uzama, ukukwazi ukugxila ukuze into nganye oyenzayo ingekude nokulula kwaye isiphumo sinqwenelekayo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukukhetha umbala wemibalaEli linyathelo elibaluleke kakhulu, kuba kufuneka khangela indibaniselwano ekhethekileyo ezenza uyilo lwakho lukhetheke kwaye luyile. Kodwa oku kuya kuba nomda ukusukela ukuba uyayifaka kwakhona ngombala, ushiya ubulula ecaleni.
Kodwa ukuba ukhetha enye indibaniselwano efanelekileyoUyilo luya kuba lukhethekileyo kwaye ayizukubakho izinto ezininzi eziyimfuneko ukuhambisa umyalezo ofuna ukuwunika.
Ukuba uyilo lwewebhu akukho nzima ukwenza amaphepha amatsha, Kufuneka ukhangele kuphela umxholo ofuna ukuwungenisa kwaye yinike uyilo olukhethekileyo. Unokwenza imenyu enamanye amamenyu, ukuze ukwazi ukufikelela kwamanye amaphepha, kodwa ngale nto ingalahleka kwaye umsebenzisi angalahleka ekuhambeni, kubalulekile ukwazi ukuba ufuna ukubonisa ntoni kwaye yintoni efunekayo kuyo.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba umxholo kufuneka ube mfutshane
Ngokucacileyo ibha yokukhangela, kokukhona umsebenzisi eliqonda iphepha. Omnye umba oza kuqwalaselwa ngulo ukubizelwa kwisenzo, uyilo olulula luya kwenza ukuba kubengcono ukubona ezi zinto zibalulekileyo.
Kufuneka nawe sebenzisa i-typography njengendawo ekuthandayo, Ukufuna ukuba lula kube lula ukuphumeza, ke kuya kufuneka ulumke.
Ungasebenzisa ifayile ye- Ukudityaniswa kweefonti ezininzi, kuba ukusetyenziswa kakuhle kwazo kubalulekile kuba yile nto iya kunika lula. I-typography kufuneka ihambelane noyilookanye, ukuze ingabinzima kwaye kufuneka ubone uyilo kunye nobungakanani bayo.
Izinto ozisebenzisayo kufuneka zibe luncedo kakhulu, kuya kufuneka ujonge imifanekiso kunye nee icon ezinceda ukuncedisa.
Olu ncedo luchaza lula ngayonjengoko kubalulekile ukusebenzisa ii-icon xa kunyanzelekile. Ukuba zisetyenzisiwe kakhulu, iphepha liya kulayisha kwakhona, linike inkangeleko engathandekiyo. Mamaxesha amaninzi umfanekiso uya kuba yinto ephambili ke kuya kufuneka ulawule ubuchwephesha ukuze ungalahli udumo.
Isisombululo sayo yonke into sisekwe nika into nganye ukubaluleka okuyifaneleyoAkufanele uzive unoxinzelelo kuba kukho iindawo ezingenanto, kufuneka uhlale ucacile malunga nokufuna kunye nento ekufuneka siyenzile ukwenza iphepha lethu ligqibelele. Akukho nzima ukufezekisa ifom elula esiyifunayo okoko nje besazi iikhonsepthi zento nganye nganye enephepha lewebhu, oku kungasinceda ukuba sazi ukuba yeyiphi na indawo elifanelwe elowo kubo.
Kunokwenzeka ukuba uthethe oko Ukulula akukho kugxila kuyilo olungenamxholo, Ukulula kufuna ukuba uyilo olulungileyo aludingi zinto zininzi ukuze luzalisekise ukusebenza kwalo.
Ezi zizinto ekufuneka sizithathele ingqalelo xa sisenza kwaye sihlaziya iphepha lethu, ngakumbi ukuba singabaqulunqi kwaye sinikezela ngenkonzo ngalo, ukusukela sifuna iindwendwe ukuba zihlale ixesha elide kangangoko kunokwenzeka kwaye banentuthuzelo yokukhangela kunye nokufumana into abayifunayo, ngaphandle kwesidingo sokuchitha iiyure bekhangela kwaye ekugqibeleni bayadinwa kwaye balishiye iphepha ngenxa Imifanekiso egqithisileyo kunye noyilo olungenamsebenzi oko kunokuba kwiphepha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Lula kuyilo lwamaphepha ewebhu
Umzali Garcia sitsho
Inqaku elinomdla kakhulu, ndimtsha kweli hlabathi limangalisayo loyilo ndifunda nje kwaye amanqaku afana neli akaniki ngcaciso kwaye anomdla kakhulu.
Phendula uKarent García